We Fight We Win. -- " More than Media ": ဦးသိန်းစိန် ဖတ်တဲ့စာအုပ်အပေါ် ခင်မမမျိုး အမြင်
ဦးသိန်းစိန် ဖတ်တဲ့စာအုပ်အပေါ် ခင်မမမျိုး အမြင်
ဖတ်ဖို့ ညွန်ကြားထားတဲ့စာအုပ် Marketing of Nations: A Strategic Approach to Building National Wealth by Philip Kotler. ကို စစ်ဆေးပါ။ သူဘယ်လို စဉ်းစားနေနိင်မလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကိုမိုးသီးပေးပို့ တဲ့မေးလ်ကို ရပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ရေးသူက Marketing လောကမှာတော့ ဂုရုလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ Principles of Marketing, Marketing Management စတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်တွေကို ရေးထားပြီး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ ဈေးကွက်ရေးရာ ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန် သင်တန်းတွေမှာ သူ့စာအုပ်တွေကို ဖတ်ကြရပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရေးရာကို ဈေးကွက်အမြင်နဲ့ သုံးသပ်တင်ပြထားတာပါ။ နိုင်ငံရေးအမြင်တော့ အားနည်းပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းမှာကော၊ ပြည်ပမှာကော အကြောင်းအရာတွေကို နိုင်ငံရေးပညာ၊ မဟာဗျူဟာရေးရာ ရှုထောင့်တွေကနေ ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်မှု၊ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှု သိပ်ပြီး နည်းပါးပါတယ်။ အခြေခံနိုင်ငံရေးအသိပညာပါ အားနည်းလေတော့ Conventional Politics ကိုလဲ အာဏာနိုင်ငံရေးလို့ မြင်သူတွေ မြင်ကြ၊ Contentious Politics ကိုလဲ အန်ဂျီအိုတွေနဲ့ လုံးထွေးကြနဲ့ ပတ်ချာလည်နေကြပါတယ်။ တခါ ကိုလိုနီခေတ်၊ ဂျပန်ခေတ်က အတွေ့အကြုံတွေ၊ ဖြတ်သန်းမှုသဏ္ဍာန်တွေ၊ လက်တင်အမေရိကရဲ့ ၁၉၆၀၊ ၇၀ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပဲ အများအားဖြင့် သိနားလည်ကြပြီ၊ ၂၁ ရာစုရဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မျက်ချေပြတ်နေကြလေတော့ မဆီလျော်တော့တဲ့ စကားလုံးတွေ၊ နည်းလမ်းတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ပဲ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေကြပါတယ်။ အရပ်သားရွေးကောက်ခံ အာဏာရှင်အစိုးရဘေးမှာကလဲ နိုင်ငံရေးပညာရှင်တွေ မရှိပဲ နိုင်ငံရေးအကြံပေးဆိုတာတွေကို စာနယ်ဇင်းသမားတွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေ
ဆွဲခန့်ထားလေတော့ ဒီလို ဈေးကွက်ရှုထောင့်၊ စီးပွားရေးရှုထောင့်က စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖို့ကိုပဲ အကြံပြုနိုင်ကြတယ် ထင်ပါရဲ့ရှင်။
ကျွန်မအမြင်ကတော့ ခုလို အချိန်မျိုးမှာ ဦးသိန်းစိန်တို့ ဖတ်သင့်တာက Ending Civil Wars တို့၊ Security Sector Reform တို့ Democratization လို ပြည်တွင်းရေးပြဿနာတွေကို လက်တွေ့ကျကျ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် သဘောတရားရေးရာစာတွေနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်နေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ Global Politics စာအုပ်တွေလို့ ထင်တာပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်လောက် Political Science နဲ့ Sociology ကို သင်းကွပ်ထားခဲ့မှုဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အဆင့်ကို နှစ်ပေါင်းတရာလောက် နောက်ကျစေခဲ့ပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းဖရိုဖရဲ ပျက်ယွင်းမှုတွေကို ဦးတည်သွားစေခဲ့ပြီရှင်။
Both U Thein Sein and You are dead wrong. Governing the country is not on the job training.
hay ...sa yar ma gyi ..lar ?..stop talking on website ... talkig on stage in myanmar
hay ..sa yar ma gyi ..lar ? where r u live .? stop talkig on website ...talking in myanmr country ....
hay ..where r u live right now ?
....don't too much talking on website ,,, r u dare ..talking in myanmar country ....ok?
No body is born to beapresident and there is no president school in this world. Neither Knowledge nor Experience can buy with money.
funniest joke i ever heard. တော်တော်ကို တိမ်တဲ့ အတွေးအခေါ်ပဲ။ သနားစရာလို့ပဲ မြင်မိတယ်။
9 March 2012 at 03:16
You guys are freaking boneheads.
ခင်မမမျိုးပြောသွားတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေက မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ယူတဲ့မြို့ ဝန် အဆင့်လောက်တောင်ကျေညက်အောင် ဖတ်ကြတဲ့စာအုပ်။ နင့်မေကလွှားတွေ သိန်းစိန်တို့နဲ့ အခု အူတူတူအတတ အတိုက်အခံဆိုတဲ့ဟာတွေက မြန်မာပြည် ကံကောင်းလွန်းလို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ဆက်တွဲကြောင့်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာကိုပဲ ထိုးကွင်းထ ပြီး အင်မတန်ညံ့ဖျင်းတဲ့သမိုင်းအမြင်မဲ့မှုတွေနဲ့။ ခု လာပြီး အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Comment ရေးပါရဲ့ နည်းနည်းလေးစောက်သုံးလေးကျအောင်တောင် Basic Grammar ကလေးတောင်ဖြောင့်အောင်မရေးနိုင်ပဲ ခင်မမမျိုးကို ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေသေးတယ်။
ခင်မမမျိုးရေ မှတ်ထားဟေ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဘယ်တော့မှ လူမွေးမပြောင်ဘူး ။ Gene ကို က စောက်သုံးလုံးလုံးမကျတဲ့ ငနုံငဖျင်း ကျွန်သဘောက် ဟောက်စား အချောင်သမား Gene နဲ့ကောင်တွေကောင်မတွေ ရဲ့ Gene.
သိပ်ပြီး ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ ဒီ ငနုံငဖျင်းတွေကိုစေတနာမထားနေနဲ့။ သေကြပစေ။